Ulondolozo lweBios | Indawo yakho yokuphepha iimpazamo kwaye ugcine iPC yakho ikhuselekile
Uyisebenzisa njani i-Ok Google yonke imihla | Lungisa isixhobo sakho ngokukhawuleza
Isicatshulwa 2022 2022 Ushiye uluvo
Kulungile uGoogle sisixhobo sokusetyenziswa kwemihla ngemihla, onokuthi usebenzise ngokulula isixhobo sakho esiphathwayo, izixhobo ezisebenzisa umncedisi zahlulahlulwe zibe ziindidi ezimbini: Izixhobo ezibandakanya ok google Devices that...
Uyivula njani ifayile yeJNLP
Isicatshulwa 2020 Ushiye uluvo
Okwangoku, isixhobo se-elektroniki sineefayile kunye nokusetyenziswa okwenziwe ngeendlela ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, xa inkqubo yokufunda ingekho, akunakwenzeka ukwenza imisebenzi ethile okanye ukujonga iifayile ezithile kwisikhangeli sakho sewebhu. Injalo imeko ngeefayile ...
Ngokuqinisekileyo ngaxa lithile ukhe wazama ukufumana idilesi ye-IP yomntu kwaye akaphumelelanga. Nangona kunjalo, ngolwazi oza kulifunda kweli nqaku, uyayazi indlela yokufumana i-IP yomntu kwimizuzwana embalwa ...
Kule mihla, uninzi lweemidlalo zevidiyo zinika abalandeli babo amandla amatsha okuqonda. Oko kukuthi, bayabavumela ukuba baphucule izakhono ezinxulumene nokulungiswa kolwazi, oko kuthetha ukusetyenziswa kwememori, ingqalelo, ukuqonda, ...
Uyifomatha njani i-NTFS usebenzisa ikhompyuter ye-Mac OS
Okwangoku, kukho iintlobo ezininzi zeefomathi zedrive drive kunye neeyunithi zokugcina zeekhompyuter zeMac OS. Enye yeefomathi ezisetyenziswa kakhulu yi-NTFS kwaye kweli nqaku siza kuthetha ngale nto. Emva koko, siza kuchaza indlela ...
Yazi ukuba inombolo evaliweyo ikubizile
Ukuba ufumanisa ukuba ufunda eli nqaku, kungenxa yokuba amaxesha amaninzi uzibuze lo mbuzo ulandelayo: Ungazi njani ukuba inombolo ebhlokiweyo inditsalele umnxeba? Ngethamsanqa, namhlanje uyakufumana impendulo kwaye uya kuba nakho ukwazi zonke ezinye iindlela onazo ...
Uyikopa njani iCD kwiPC yakho
Ukukopa iCD kwiPC yinto eyayisenziwa rhoqo, kuba zazingabikho kangako iindlela zokugcina ulwazi. Nangona kunjalo, njengoko yonke into iguqukile, oku kulityelwe ngabantu abathile ...
Izicelo zokukopa abafowunelwa kwi-iPhone ukuya kwi-SIM
Ukuba ufuna ukuthumela ngaphandle abafowunelwa be-SIM kwiSIM kwaye uqaphele ukuba akukho khetho koku, kuya kufuneka wazi ukuba kunokwenzeka ukukwenza ngokufaka usetyenziso. Into elungileyo malunga nolu khetho kukuba ungasicima usetyenziso olufakelweyo kube kanye ...
Uyikhupha njani iFortnite
Xa ukhipha usetyenziso kwikhompyuter kwaye ungasebenzisi inkqubo efanelekileyo, kuhlala kukho iifayile ezikhululekileyo ezithatha indawo kwaye zichaphazela ukusebenza kwayo. Ukudityaniswa kwemidlalo yevidiyo kuhlala kuvelisa le meko, ke ukuba ufuna ukukhipha iFortnite qiniseka ...
Uyihlaziya njani imephu yeTomTom simahla
Iinkqubo zokuhamba ngenqanawe kwizithuthi ziya zisetyenziswa kwilizwe jikelele, ukuhlangabezana nale mfuno kukho izicelo ezininzi kwimarike. Nangona kunjalo, kukho ezinye zezicelo ezinje ngeTomTom eyonwabela phezulu ...
Uyicwangcisa njani i-TP-LINK eyandisiweyo
Ukuba unesixhobo se-TP-LINK Extender kwaye awazi ukuba uza kusilungiselela njani, ukwindawo elungileyo, kuba apha uya kufumana amanyathelo oza kuyilandela ukuyiphumeza. Xa uneendawo ekhayeni lakho okanye eofisini apho isiginali ye-Intanethi engenazingcingo ...
Vula ikhadi elikhuselweyo lokubhala le-SD
Uninzi lwabantu namhlanje lunengxaki yokukopa kunye nokuhambisa iifayile kumakhadi e-SD amancinci. Oku kungenxa yokhuselo lokubhala olunazo ezi zixhobo ze-elektroniki. Kufuneka iqatshelwe ukuba olu khuselo lokubhala sisixhobo sokhuseleko ...
Khuphela i-Skype simahla ngokulula
Ukuba ufuna i-App yokuthumela imiyalezo kunye neefowuni ezivela kwizixhobo zakho, akukho nto ilunge ngakumbi kunokukhuphela i-Skype simahla. Ngaba loo nto, esi sicelo sibe lolunye ukhetho olufanelekileyo lokunxibelelana nosapho kunye nabahlobo bakho usebenzisa ...
Uninzi lwezicelo ezisetyenzisiweyo ukwenza i-Android Animoji
Ukuba unesixhobo se-Android kwaye ufuna ukwazi ukuba ungayenza njani iAnimoji eyahlukileyo ngayo, ukwindawo elungileyo. Kuba namhlanje siza kuchaza usetyenziso olwahlukeneyo onokuzisebenzisa ukuzenza. Ngokufanayo, uya kufunda amanyathelo ...
Funda indlela yokukopa iDVD ekhuselweyo
Ukuba kudala ukhangela indlela yokukopa iDVD ekhuselweyo ixesha elide kwaye awukaphumeleli, ufikelele kwibhlog ebonisa. Kungenxa yokuba namhlanje uya kuyazi iinkqubo eziyimfuneko ukuyiphumeza, ukuqala ngezixhobo ezisetyenziswa kakhulu kwiWindows ukuya ...
Ukucima iinombolo zeSIM
Ukuba udiniwe kukuba neenombolo zefowuni zabantu ongasathethi nabo kwisixhobo sakho kwaye nokuba uyazicima ziyaqhubeka ukubonakala, apha uza kusifumana isisombululo. Kuba siza kuchaza ukuba ungabasusa njani abafowunelwa beSIM kwizixhobo ze-Android ...
Uyifakelwa njani iKali Linux
Ukuba udiniwe kukujonga ukuba ungayifaka njani i-Kali Linux ufike kwindawo elungileyo, kuba kweli nqaku uza kubona ukuba ungayenza njani. Namhlanje, kuqhelekile kubasebenzisi abaninzi ukufaka inkqubo yokusebenza kwiikhompyuter zabo ukuvavanya ukhuseleko ...
Wazi njani umhla wokuthengwa kweselfowuni
Ukuba kumaxesha amaninzi ukhe wakhangela ulwazi malunga nendlela yobudala beselfowuni? kwaye khange uphumelele, namhlanje unethamsanqa. Kungenxa yokuba kweli nqaku siza kuwuphendula lo mbuzo, sikunike zonke iinkcukacha malunga neendlela ezahlukeneyo ...
Khuphela iJurassic World Evolution
Ukuba ungomnye wabantu abathanda ixesha leCretaceous kunye nemibono ngeedinosaurs kunye nemidlalo yevidiyo, le posi yeyakho. Kutshanje, kukhutshwe umdlalo wevidiyo omtsha, iJurassic World Evolution, ethi, ...
Uyikhuphela njani imidlalo yasimahla kwiNintendo 3DS
Kule mihla, ukudlala imidlalo yevidiyo kuya kusiba noqoqosho ngakumbi ngenxa yenkqubela phambili yetekhnoloji. Ngenxa yoko, awuyi kuba nakho ukuzuza kwizibonelelo ezihlala zikhona, kodwa kunokwenzeka ukuba ukhuphele imidlalo emininzi esemgangathweni simahla ngeendlela ezahlukeneyo ...